XOG: Shan Laacib Oo Usoo Wada Ciyaaray Arsenal & Juventus Iyo Halka Uu Aaron Ramsey Ka Geli Doono Silsiladda Xidhiidhsanayd Illaa 1999-kii – Cadalool.com
XOG: Shan Laacib Oo Usoo Wada Ciyaaray Arsenal & Juventus Iyo Halka Uu Aaron Ramsey Ka Geli Doono Silsiladda Xidhiidhsanayd Illaa 1999-kii
354 kulan oo uu u saftay kaddib, Aaron Ramsey ayaa la filayaa inuu soo afjaro waayihiisii Arsenal, waxaana loo badinayaa inuu ka degi doono kooxda Juventus ee haysata horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A.
Ramsey oo toban sannadood joogay Arsenal, waxa uu u dhaliyey 61 gool, laakiin mar walba waxa uu ahaa aasaasi, hase yeeshee waxa uu doortay in uu xirfaddiisa soo afjaro, isla markaana aanu qandaraaska u cusboonaysiinin naadiga lagu bartay.
Haddii uu ugu dambayn rumeeyo wararka suuqa ee sheegaya inuu ku biirayo Juventus, waxa uu fursad u heli doonaa inuu ka garab ciyaaro Cristiano Ronaldo iyo Paolo Dybala, isla markaana uu kula biiro halganka kooxdaasi ugu jirto inay ku guuleysato tartanka Champions League oo intii ay jirtay ay laba jeer oo kaliya ku guuleysatay, laakiin ay iska yeelatay horyaalka Serie A oo 28 mar ay ku guuleysatay.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan ciyaartoy oo waqtiyadooda usoo wada ciyaaray Arsenal iyo Juventus oo uu raadkooda raacayo Aaron Ramsey.
Thierry Henry waxa uu dunida caan ka noqday xilligii uu xulka qaranka France u ciyaaray Koobkii Adduunka 1998-kii oo uu dhaliyey saddex gool, kana caawiyey waddankiisa inuu ku guuleysto Koobkaas oo finalkii ay ku garaaceen Brazil. Sannad kaddib Koobka koobka adduunka oo ahayd 1999-kii, waxa uu ku biiray kooxda Juventus oo kasoo qaadatay Monaco, 19 kulan oo uu u ciyaaray kooxda reer Talyaani kaddib waxa uu dhaliyey saddex gool oo kaliya, waxaana laga ciyaarsiiyey baal weerar ah. Isla sannadkaas oo aan dhamaanin, Juventus waxay go’aansatay inay ka iibiso Arsenal oo uu xiise uga yimid tababaraheedii Arsene Wenger.
Isla markii uu gaadhay garoonkii guulaha ay ku gaadhay Gunners ee Highbury, waxa uu Wenger ka ciyaarsiiiyey weerarka dhexe, waxaanu markiiba soo bandhigay hibadiisa ciyaareed iyo in ay u sahlan tahay inuu si fudud u dhaliyo goolal badan oo qurux badan.
Tayadiisa ciyaareed, waxay dunida qabsatay markii uu garab ka helay halyeygii kooxda ee Dennis Bergkamp oo garabkiisa taagnaa, isla markaana ku habi jiray kubbado qurux badan oo sabab u noqday in Arsenal ay noqoto mid ka mid ah kooxaha loogu taageerada badan yahay caalamka, gaar ahaan qaaradda Afrika oo ay midda koowaad ka noqotay, sababtuna ay ahayd ciyaartooyo badan oo madow ah oo ku jiray sida Thierry Henry.
Henry waxa uu ka caawiyey Arsenal inay saddex jeer ku guuleysato horyaalka Premier League sannadihii u dhexeeyey 2001 illaa 2004, waxaanu hoggaaminayey kooxdii cajiibka ahayd ee lagu naanaysi jiray ‘Invicinciples’ ee xili ciyaareedkii 2003-04 ku guuleystay Premier League iyagoon hal mar laga badinin. Xili ciyaareedkii 2005-06, waxa uu Arsenal ka caawiyey inay tagto finalka Champions League oo ay Barcelona kaga adkaatay 2-1.
Henry waxa uu Arsenal u ciyaarayey illaa laga gaadhayey sannadkii 2007, waxaanu u dhaliyey 226 gool, 369 kulan oo uu u ciyaaray, waxaanu xirfaddiisa ula wareegay Barcelona oo uu u ciyaarayey illaa 2010 ka hor intii aanu tegin New York Red Bulls, laakiin si kooban ayuu ugu soo laabtay Arsenal sannadkii 2012, waxaanu u ciyaaray afar kulan oo kale. Marka laysku geeyo kulamadii uu u ciyaaray kooxda woqooyiga London, waxay noqonayaan 373 oo uu u dhaliyey 228.
Guji 2 illaa 5 si aad u akhrido warbixinta oo dhan